Whitepapers izay mitondra ny varotra: Torohevitra 5
Asabotsy, Aogositra 23, 2014 Zoma, Aogositra 22, 2014 Douglas Karr
Isan-kerinandro dia misintona whitepapers aho ary mamaky azy ireo. Farany, refesina ny fahefan'ny whitepaper, tsy amin'ny isan'ny fampidinana, fa ny vola azo azonao avy eo amin'ny famoahana azy. Ny whitepapers sasany dia tsara kokoa noho ny sasany ary tiako hizara ny hevitro momba ny zavatra inoako fa mahatonga whitepaper tsara.
Ny lamba fotsy mamaly olana sarotra misy antsipiriany sy data angona. Mahita whitepapers vitsivitsy aho izay mety ho lahatsoratra bilaogy tsotra izao. Ny whitepaper dia tsy zavatra tadiavinao ho mora tadiavina ao anaty Internet, mihoatra lavitra noho izany - mihoatra ny lahatsoratra bilaogy, ambany noho ny e-book.
Ny lamba fotsy mizara ohatra avy amin'ny mpanjifa tena izy, fanantenana, na zavatra vita an-tsoratra hafa. Tsy ampy ny manoratra antontan-taratasy milaza ny thesis, mila manome porofo manamarina izany ianao.
Ny whitepaper dia mahafinaritra estetika. Ny fiheverana voalohany dia manisa. Rehefa manokatra whitepaper aho ary mahita ny Microsoft Clip Art, dia matetika tsy mamaky bebe kokoa. Midika izany fa tsy nandany fotoana ny mpanoratra… izay midika fa tsy nanokana fotoana nanoratana ny atiny koa izy ireo.
Ny whitepaper dia tsy zaraina maimaimpoana. Tokony hisoratra anarana amin'izany aho. Ianao dia mivarotra ny mombamomba ahy ho an'ny mombamomba ahy - ary tokony prequalify ahy ho mpitarika miaraka amin'ny takiana fisoratana anarana takiana. Ny fananganana pejy fitobiana dia mora tanterahina amin'ny fampiasana fitaovana toa an mpanamboatra endrika an-tserasera. Raha tsy dia matotra amin'ny lohahevitra aho dia tsy hisintona ny whitepaper. Omeo pejy fitobiana tsara izay mivarotra ny whitepaper ary manangona ny vaovao.
Ny whitepaper pejy 5 ka hatramin'ny 25 tokony ho manery ampy ahy hijerena anao ho fahefana sy loharano amin'ny asa rehetra. Ampidiro ny lisitra sy ny faritra misy naoty sao tsy vakiana sy ariana tsotra izao. Ary aza adino ny mamoaka ny mombamomba ny fifandraisanao, tranokala, bilaoginao ary ireo fifandraisana ara-tsosialy ao anatin'ny vatan'ny asa.
Misy fomba roa hanamboarana ny whitepapers hahasarika ny ampy hitondrana ny varotra.
Transparency - Ny voalohany dia ny milaza mangarahara amin'ny mpamaky tsara ny fomba hamahanao ny olany amin'ny antsipiriany voafetra. Ferana ihany ny pitsopitsony, raha ny marina, ka aleon'izy ireo miantso anao hikarakara ny olana toy izay ny tena manao izany. Hampiasa ny mombamomba anao ireo mpanao azy io raha hanao azy irery…. aza manahy… tsy hiantso anao mihitsy izy ireo. Nanoratra taratasy vitsivitsy momba ny fanatsarana ny bilaogy WordPress aho - tsy vitsy ny olona miantso ahy hanampy azy ireo hanao izany.
fahaizana - Ny fomba faharoa dia ny fanomezana ny mpamaky anao amin'ny fanontaniana sy valiny rehetra ahafahanao manana loharano tsara kokoa noho ny olon-kafa rehetra. Raha manoratra whitepaper ianao amin'ny "Ahoana no fomba hanakarama mpanolo-tsaina ny haino aman-jery sosialy" ary omenao ny mpanjifanao fifanarahana misokatra izay azon'izy ireo avela amin'ny fotoana rehetra… ataovy izay faritra ao amin'ny whitepaper anao amin'ny fifampiraharahana fifanarahana! Raha atao teny hafa, manohana sy milalao araka ny herinao.
Miantsoa hanao asa - Gaga tokoa aho amin'ny habetsaky ny whitepapers novakiako teo am-pamaranako ilay lahatsoratra ary tsy fantatro ny momba ny mpanoratra, ny antony ilana azy ireo hanoratra momba ilay lohahevitra, na ny fomba hanampian'izy ireo ahy amin'ny ho avy. Manome antso-to-hetsika mazava ao anaty whitepaper anao, ao anatin'izany ny nomeraon-telefaona, adiresy, ny anaran'ny matihanina amin'ny varotrao, ny pejy fisoratana anarana, ny adiresy mailaka… izy rehetra dia hanamafy ny fahaizany mamadika ny mpamaky.
Tags: Content Marketingahoana no manoratra whitepaperwhitepapers fivarotanaWhitepaperfanoratana hevitra
Jolay 24, 2010 amin'ny 4:16 PM
Hevitra lehibe, Doug. Hitako ihany koa fa orinasa maro izay manandrana mampiasa taratasy fotsy mba hanafainganana ny fizotran'ny varotra dia manala ny roa amin'ireo akora manan-danja indrindra. Voalohany, manoritsoritra olana ve izy ireo izay tena mifandray amin'ny zavatra omeny ho vokatra na serivisy, ary faharoa, inona no mampiavaka azy ireo? Tsy voatery ho tsara kokoa. (Ny mpanjifa no hanapa-kevitra izany, na impiry impiry ny mpivarotra no hilaza izany).
Jolay 24, 2010 amin'ny 9:31 PM
@ mpitatitra entana, tsy miombon-kevitra aho hoe tokony hamaritra ny mahasamihafa anao ianao – fa tsy misy olona mino marina ny orinasa iray amin'ny filazana fotsiny hoe hafa izy ireo. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mamorona hafatra mahafeno fepetra ao anatin'ny taratasy fotsy. Amin'ny famaritana ny fepetra dia afaka manavaka ny tenanao ianao!